Dhageyso: Gaadiidleyda Muqdisho oo Saakay Shaqo joojin ku dhawaaqay Maxay tahay Sababta Maxayse ka tiri Dowlada???? | Kismaayo24 News Agency
Dhageyso: Gaadiidleyda Muqdisho oo Saakay Shaqo joojin ku dhawaaqay Maxay tahay Sababta Maxayse ka tiri Dowlada????
Tuesday November 29, 2016 - 11:44 under Somali News by Tifaftiraha K24
Gaadiidleyda Gobolka Banaadir ayaa Saakay ku dhawaaqay shaqo joojin ka dib markii ay sheegeen in laga qaadaayo lacago aad u fara adan oo aysan awoodin.
Gaadiidkii dadweynaha ay raaci jireen ayaanan saaka inta badan ka shaqeynayn Xaafadaha Magaalada Muqdisho, waxaana gaadiidka ay isugu tageen Saybiyaano iyo Isgoyska Fagax oo Waqooyi iyo Koonfur Magaalada ka kala xiga.
Wadayaasha ayaa sheegaya in Shirkad lagu magacaabo Takaful oo Dowladda ay heshiis la gashay ay ku qasbeyso inay bixiyaan lacago fara badan oo lagu sheegay inay tahay mid caymis ay ku galayaan gaadiidka.
Gaadiidleyda ayaa sheegay in ay ogol yihiin lacagtii ay ka qaadi jirtay dowladda Somaliya ,laakiin ay jiraan lacago lagu sheegay caymis oo ay ka qaado shirkad Gaadiidleyda u soo martay dowladda Somaliya.
Dadkii raaci jiray gaadiidka dadweynaha ayaa saaka lagu arkayaa wadooyinka iyaga oo lugeynaya,halka qaarkoodna ay raacayaan mootooyinka yar yar ee Bajaajta oo qiimaha lagu raaco ay ugu yar tahay hal doolar.
Hadaba Cabashaad maanta ka soo yeertay Gaadiidleyda Gobolka Banaadir waxaa goordhaw ka hadlay Hanti dhowraha Guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale iyo sidoo kale Garyaqaanka guud ee dowladda Cusmaan Cilmi Guuleed oo shir jaraa’id wada jir ugu qabtay Magaalada Muqdisho.
Garyaqaanka Guud ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in aysan sharci aheyn lacagta laga qaado gaadiidleyda gobolka Banaadir ee lagu sheegay Ceymiska.
Sidoo kale Hanti dhowraha Guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa dhankiisa sheegay in dowladda Soomaaliya ay baaritaan ku sameyn doonto sababta keentay in shirkad si gaara loo leeyahay in gacanta loo geliyo Ceymiska dalka.